Basic Political Science Part (12) ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Basic Political Science Part (12)
Saturday, July 25, 2009 0000 No comments
နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောသဘာဝများ အပိုင်း (၉)
မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အယူအဆများသည် အခြေခံအားဖြင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအမများမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယူဆရပါသည် ... ။ ဥပမာအားဖြင့် ... မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်း အထောက်အထားများအရ အနော်ရထားမင်းမှသည် သီပေါမင်းအထိ ... ခတ်အဆက်ဆက်၌ ကျင့်သုံးခဲ့သော အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်များသည် အကြွင်းမဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်အတွင်း ဖြတ်သန်းခဲ့သည်သာ ဖြစ်ပေသည် ... ။ ထို့ကြောင့် ရှေးခေတ်မြန်မာနိုင်ငံရေး အယူအဆ၌ ထူးခြားသော ... အတွေးအခေါ် အယူအဆများ ... မတွေ့ရဘဲ မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး နာယကဂုဏ် (၆) ပါး ဟူသော ကျင့်ဝတ် သိက္ခာများအပေါ် အခြေတည်၍ တိုင်းပြည်အား စီမံ အုပ်ချုပ် ခဲ့ကြလေသည်။
4. ရိုးသား တည်ကြည် ဖြောင့်မတ်ခြင်း
5. နူးညံ့ သိမ်မွေ့ခြင်း
6. အဌင်္ဂသီလ ဆောက်တည်ခြင်း
7. အမျက် မထွက်ခြင်း
9. ပြည်သူကို မညှဉ်းဆဲခြင်း
10. ပြည်သူကို မဆန့်ကျင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါ၏။
(မှန်နန်းမဟာ ရာဇ၀င်တော်ကြီး။ စာ -၃၈)
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရေး အယူအဆများ၏ မူလ အခြေခံ အကြောင်းတရားများသည် ... မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး ဟူသော ကျင့်ဝတ် သိက္ခာများပင် ဖြစ်ပေသည် ... ။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ... တိုင်းပြည်အား စီမံအုပ်ချုပ်သော စနစ်အားဖြင့် (၂) မျိုး (၂) စား ရှိခဲ့ပြီး တနည်းအားဖြင့် ... မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတလျောက် ထွန်းကားခဲ့သော ... အကြွင်းမဲ့ သက်ဦးဆံပိုင် စနစ်အား လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းစေ၍ သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည် ... ။ ထို့သို့ ထူထောင့်ခဲ့ရာ၌ လွတ်လပ်ရေးရပြီး (၁၉၄၈-၁၉၆၂) ထိ ပါလီမန် ဒီမိုဒီမိုကရေစီ စနစ်အား ၁၉၄၇ အခြေခံ ဥပဒေဖြင့် (၁၄) နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည် ... ။ (၁၉၆၂) မတ်လ (၂) ရက်နေ့၌ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်း၍ အုပ်ချုပ်စေပြီး (၁၉၇၄-၁၉၈၈) ထိ စစ်တပ်မှ ခေါင်းဆောင်များ အရပ်ဘက်သို့ အသွင်းပြောင်း၍ မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီဟု ခေါ်သော တစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်သော စနစ်ဖြင့် (၁၉၇၄) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအား ပြဌာန်းကာ တိုင်းပြည်အား အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည် ... ။ ဤအခြေအနေများအား လေ့လာသောအခါ ... မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၌ အယူအဆ အတွေးအခေါ် များသည် အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် များအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုရပေမည် ... ။
မျက်မှောက်ကာလ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ်၌ ... ရှေးခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အယူအဆများ၏ သက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာ (သို့မဟုတ်) ရှေးခေတ် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အယူအဆများသည် မျက်မှောက်ခေတ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်အပေါ် မည်မျှ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသနည်း ဆိုသော မေးခွန်းအား ဤနေရာမှ ဖြေဆိုလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိကြောင်း ... တွေ့ရပေမည်သာ ဖြစ်ပါသည် ... ။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ... ဆိုင်ရာ အယူအဆများသည် ကိုယ်ပိုင် မူဟန်ပျောက်လျှက်ရှိပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား ... ၊ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများ၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆများမှ ကောင်းနိုးရာရာများအား ရွေးချယ်၍ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့များနှင့် ကိုက်ညီမည့် ပုံစံများကို ယူဆောင်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသော ဖြစ်စဉ်တလျှောက် ဆက်စပ် တွေးခေါ်၍ ဆွေးနွေးနေခဲ့ကြဟန် ရှိပါသည် ... ။
သို့သော်လည်း ... မှန်ကန်သော လမ်းစဉ် တစ်ခုကိုကား တိတိကျကျ သတ်မှတ် ချမှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းကား မရှိခဲ့ သေးချေ ... ။ ဤသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း ... ။
ဤအဖြေအား မဖြေဆိုမီ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလတ်များအပေါ် လေ့လာရာ၌ အောက်ပါအချက် အလက်များသည် ပြန်လည် သုံးသပ်သင့်ပေသည် ... ။
1. မြန်မာနိုင်ငံသည် အကြွင်းမဲ့သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်အတွင်း ရှည်လျားစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ခြင်း။
2. မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတလျောက် နှစ်ပေါင်း တထောင်ကျော်၌ နှစ်ပေါင်းကိုးရာကျော်ခန့်သည် အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ ပြည်ပနှင့်သော်လည်းကောင်း ရှည်လျားစွာ စစ်မက် ဖြစ်ပွါးနေခဲ့ခြင်း။
3. အနော်ရထားမင်း လက်ထက်မှ ထူထောင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံအား သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြန်လည် စုစည်းခဲ့ရခြင်း၊ ထိုစည်းလုံးမှု ပျက်ပြားနေသော ကာလများ၏ အကျိုးဆက်များ။
4. ကမ္ဘာပေါ်၌ ခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်ခဲ့သော အစိုးရများသည် များသောအားဖြင့် အကြွင်းမဲ့ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နှင့် အာဏာရှင်စနစ်များသာ ထွန်းကား ခဲ့ခြင်း၊
5. မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တလျောက် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းထက် ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချခြင်း၊ နိုင်လို မင်းထက် လုပ်ခြင်း၊ မိမိ အင်အား သာလာပါက တဖတ်သားအပေါ် အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျ လိုခြင်း၊ မနာလိုခြင်း၊ မိမိအနစ်နာ ခံခဲ့ရခြင်းအပေါ် ပြန်လည်၍ အခွင့်ထူးများရယူ လိုခြင်း၊ ရာထူးစည်းစိမ် အထူး မက်မောခြင်း၊ ငွေကြေး၊ တန်စိုးလက်ဆောင် မက်မောခြင်း၊ မိမိ၏အရှိန် အ၀ါဖြင့် မိမိတို့ မိသားစု ဆွေမျိုးသာချင်း ကောင်းစားရေးအား ဦးစွာ လုပ်ဆောင်နေကြခြင်း။
6. စည်းလုံးမှု လုံးဝမရှိခြင်း။
7. စနစ်တကျ တိုင်ပင် စည်းဝေးမှု လုံးဝမရှိခြင်း။
8. လူလူချင်း စာနာစိတ် အလွန် အားနည်းခြင်း။
9. ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လမ်းစဉ်အား ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတော်ဖြစ်သော်လည်း အတ္တ၀ါဒနှင့် အနတ္တ လမ်းစဉ်အား နိုင်ငံရေး၌ မှန်ကန်စွာ သဘောပေါက် နားလည်မှု အလွန်အားနည်းနေခြင်း။
10. ငွေကြေး၊ ရာထူးထက်ပို၍ လူကို တန်းဖိုးထား တတ်သော စိတ်ဓါတ် အလွန် အားနည်းခြင်း။
11. ကျေးဇူးရှင်ကြီး၊ ဆရာကြီးအဖြစ်နှင့်သာ အစဉ်အမြဲ ခံယူလို၍ တပည့် မွေးသော အကျင့်ဆိုးများသာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လောက၌ ထွန်းကားနေခြင်း။
12. မိမိ၏ပုဂ္ဂလ အကျိုးစီးပွါးမှလွဲ၍ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတတ်ရေး လုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ အလွန် ရှားပါးနေခြင်း၊
13. ဒေသတစ်ခု၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပေါ်တွင် ဖြေရှင်းခြင်းကူညီခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ဆောင်ရာ၌ မိမိ၏ အကျိုးစီးပွါးအား ထည့်သွင်း တွက်ချက်၍ အမြတ်ထုတ်တတ် သာ ဖြေရှင်းမှုမျိုးသာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး လောက၌ ထွန်းကားနေခြင်း။
14. နိုင်ငံရေး ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရာ၌ စုပေါင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ မှန်ကန်သော ဦးဆောင်မှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ တဦးနှင့် တဦး အပြန်အလှန် တန်ဖိုးထား၍ အနစ်နာခံခြင်း စိတ်ဓါတ်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခိုင်မာသော ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာရှိမှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ သတိနှင့် အသိပညာရှိမှုဖြင့် လည်းကောင်း၊ စုပါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ အောင်မြင်ရာဖြစ် ကြောင်းအား လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနိုင်မှု အလွန် အားနည်းခြင်း။
15. မျိုးဆက်သစ် ပြုစုပျိုးထောင်မှု အလွန်အားနည်းခြင်း။
16. ပန်းတိုင်မရောက်ခင် “တက်” ထောင်တတ်သော အကျင့်ဆိုးရှိခြင်း။
17. သာယာဖွယ်၊ လွတ်လပ်ခြင်းတို့နှင့် ထိတွေ့ပြီးလျှင် ဘ၀မေ့ခြင်း၊ မိမိတို့၏ မူလရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်အား မေ့လျှော့ခြင်း။
18. အောင်မြင်မှု အပေါ်၌သာ စံစား ခံစား တတ်သော်လည်း ပြဿနာများအပေါ် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့သော် တာဝန် ယူရဲသော သတ္တိ၊ တာဝန် ခံရဲသော သတ္တိတို့ရှိမှု အလွန်အားနည်းခြင်း။
စသည့် အကြောင်းတရားများကြောင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးသည် အရှိန်အ၀ါမှေးမှိန်လျှက် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။